Wednesday July 01, 2015 - 02:07:31 in Wararka by Web Admin
Hay'ada marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UDI ee ah hay'ada socdaalka wadanka Norway ayaa sharciyo cusub soo saartay 24-ka bisha Juun, iyadoo si qoto dheer uga hadashay sharciyo cusub oo lagu soo kordhiyay hanaanka dowlada Norway uq
Hay'ada marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UDI ee ah hay'ada socdaalka wadanka Norway ayaa sharciyo cusub soo saartay 24-ka bisha Juun, iyadoo si qoto dheer uga hadashay sharciyo cusub oo lagu soo kordhiyay hanaanka dowlada Norway uqaabili doonto qaxootiga cusub ee ka imaanayo dalalka sida Soomaaliya, Eriteriya, Suuriya IWM.
Hadaba warbixintaani oo aad udheer isla markaana lagu daabacay Shabakada rasmiga ah ee Hay'ada UDI ayaa kasoo qaadanay qeybta quseyso Soomaalida.
Warbixinta bilaha luuliyo iyo ogoosto ee 2015-ka
Warbixintani waxay ku socotaa dhammaan dadka Soomaaliya u dhashay ee sugaya in kiiskooda laga soo jawaabo, markay doonaanba codsiga magangelyada ha soo xareeyeene. Waaxda Agaasinka Ajnebiga (UDI) waxaa hadda hor yaalla kiisas magangelyadoon oo badan kuwaas oo u baahan in laga baaraandego. Sidaas darteedna nasiibdarro wakhti ayay qaadanaysaa in aan ku wareysanno. Waa in aan ku wareysanno ka hor intaynaan ka baaraandegin codsigaaga magangelyada.
Dad ka yimid dalal badan oo ay soomaalidu ka mid tahay ayaa jawaabta muddo dheer sugi doona. Si ay UDI-du ugu shaqayso sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah waa in aan kala hor marinnaa kiisaska aan ka shaqaynayno. Taas oo keeneysa in ay dad ka yimid dalalka qaarkood jawaabta muddo dheer sugaan.
Goorma ayaa lagu wareysan doonaa?
Dad badan ayaa muddadii u danbaysay magangelyo codsaday. Waxaa kale oo jira in ay xagaaga yaraan doonaan kiis-hayayaasha ka baaraandegaya kiisaska fasaxa xagaaga dartiis. Sidaas darteedna waxaa laga yaabaa in aad muddo dheer sugto in lagu wareysto. Waxaan qiyaasaynaa in ay dadka intooda badan wareysiga sugi doonaan ilaa iyo 9 bilood.
Marka aan dadka wareysiga ugu yeerayno, sida loo soo kala horreeyay dadka uma kala hor marinno. Sidaas darteed waxaa dhici karta in qof muddo gaaban sugayay in Warbixin ku socota dadka Soomaaliya u dhashay ee magangelyada soo codsaday Informasjon til borgere av Somalia Ventetid, Somalisk språk Waxaa qoray Adeegga talabixinta ee qaybta magangelyada Juun 2015 Les mer på udisia.no/nyheter Skrevet av [Navn], [Avdeling] wareysiga looga hor yeero kuwo muddo intaas ka badan sugayay.
Waxay xataa taasi ku dhici kartaa dad isku xero ku jira. UDI-du waxay go’aansatay in ay sidaas samayso sababo baraatiko ah awgood. Taas micnaheedu ma aha in ay kiiskaaga wax ka khaldan yihiin ama in aan ku hilmaannay.
Dadka hadda sugaya in la wareysto kuwooda muddada ugu dheer sugayey waxay sugayeen ilaa iyo bishii sibtembar ee 2014-kii.
Haddii aad ku jirto xero ku-meel gaar ah ama aad haysato carruur ku jirta da’di ay waxbarashadu (dugsi) waajibka ku ahayd
Waxaan mudnaanta koowaad siinnaa qoysaska wata carruur ku jira da’dii ay waxbarashadu waajibka ku ahayd islamarkaana ku nool xero ku-meelgaar ah, laakiin iyaga laftigooda ayaa laga yaabaa in ay sugaan 2 ilaa 3 bilood.
Qoysaska carruurta wata ee ku nool xeryaha rasmiga ah waxaa laga yaabaa in ay wareysiga sugi doonaan in le’eg inta ay dadka kale sugaan.
Haddii aad ku nooshahay xero ku-meelgaar ah, hal maalin ka hor ayaa laguu sheegi doonaa in aad wareysi leedahay.
Haddii aad ku nooshahay xero rasmi ah, qiyaasti hal toddobaad ka hor ayaa laguu soo sheegi doonaa in aad wareysi leedahay.
Waxaa laga yaabaa in lagaa beddelo xerada ku-meelgaar ah oo laguu beddelo xero rasmi ah iyada oo aan weli lagu wareysan, laakiin taas lama hubo. Haddii lagu beddelayo, shaqaalaha xerada ayaa kuu sheegaya goorta lagu beddelayo iyo meesha laguu beddelayo.
Goorma ayaa codsigaaga laga soo jawaabayaa?
Marka lagu wareysto ayaa laguu sheegayaa inta aad sugi doonto jawaabta codsigaaga. Sida ay u badan tahay waxaad sugi doontaa 3 bilood wareysiga kaddib, laakiin waa dhici kartaa in ay jawaabtu qaadato wakhti intaas ka dheer. Wakhtiga aad sugeyso wax micno ah uma samaynayo in laguu oggolaanayo in aad Norway joogto iyo in kale.Waan kuu soo sheegeynaa marka aan arrintaada go’aan ka gaarno.
Waxaa dhici kara in dad ku jira xerada aad ku jirto in ay jawaab helaan adiga oo aan jawaab weli helin. Taas micnaheedu ma aha in ay kiiskaaga wax ka khaldan yihiin ama ay UDI ku hilmaantay, ee waa mid la xiriirta qaabka ay UDI-du hawlaheeda u maareyso.
Inta aad sugeyso jawaabta codsigaaga
Waxaan kaa codsanaynaa in aadan UDI-da teleefan u soo dirin oo aadan codsiga weydiinnin inta aad jawaabta sugeyso. Taasi keeni meyso in aan soo dedejinno ka- Les mer på udisia.no/nyheter Skrevet av [Navn], [Avdeling] baaraandegidda kiiskaaga. Waxna kaagama sheegi doonno goorta kiiskaaga la dhammayn doono.
Warbixinta wakhtiga sugitaanku way is beddeli kartaa.Warqadda warbixinta ee middan xigta waxay soo bixi doontaa dhammaadka bisha ogoosto.
Waxaad warbixinno ku saabsan wakhtiga sugitaanka ka heli kartaa www.udi.no
Haddii aadan ku jirin xero, waxaan kaa codsanaynaa in aad la socoto:
Adiga oo halkaas ka helaya warbixintii ugu danbeysay ee wakhtiga sugitaanka wareysiga iyo muddada ka baaraandegga codsiyada magangelyada.